I-Viber Spy App - Landela i-Viber Chat, Izingcingo Zezwi, Amavidiyo kanye Nezithombe Ezihlanganyela
I-Viber Spy App - Ngokuyimfihlo Ukuhlola I-Viber Chat, Izingcingo Zezwi Nezithombe Ezihlanganyele
Ukulandelela i-Viber isithunywa esheshayo kubalulekile njengamanje, izingane ezincane zizinxushunxushu futhi abaqashi bachitha isikhathi sabo ku-Viber. Ekugcineni kungaba yingozi enkulu kubantwana kanye nesibonakaliso esibi sabaqashi.
Hlola izingxoxo ze-Viber
Uhlelo lokusebenza lwe-Viber spy luyisicelo seTheOneSpy kuya ukulandelela izingcingo ze-Viber nezingxoxo ngaphandle kokufinyelela ngokomzimba kusuka noma kunini noma nini nanoma iyiphi indawo. Njengabazali ukhathazeke kakhulu ngokusetshenziswa kwengane yakho ngokweqile isithunywa esheshayo futhi abasebenzi basebenzisa njengethuluzi elijabulisa, iTheOneSpy yiyona I-Viber software yokuqapha ingxoxo ungathembela ngokungekho emthethweni.
I -OneSpy Viber Spy iyakwazi ukukwazi
Buka uhlu oluphelele lwezingxoxo ze-Viber bese ubheka imisebenzi yamuva
Hlola ingxoxo ye-Viber futhi ubone izingxoxo
Umsebenzisi angabuka izingodo zesikhathi nokuxoxa izingodo
Umsebenzisi angabuka shayela imininingwane yezingodo ngokuningiliziwe kanye nesikhathi esigcwele isitembu
Thola izandla zakho kukho konke call izingodo kanye IMs izingodo ngokusebenzisa ideshibhodi.
Qopha i-Viber ingxoxo yesikrini ne-TOS Viber irekhodi lesikrini
Landelela izingxoxo zezingxoxo ze-Viber ku-Android & iPhone amadivaysi smartphone
Indlela Yokuhlola I-Viber Chat, Izingcingo Zezwi Nezithombe Ezibelwane Ngayo I-TheOneSpy App Dashibhodi?
I-Viber Call Logs
Vele uthathe idivayisi yakho yeselula uvule isiphequluli bese ubhala cp.theonespy.com. Uzofinyelela ku-panel ye-TheOneSpy Viber Tracker control. Ikhasi lizovela maduze futhi ubone "amasevisi ami" phezulu kwesikrini. Thepha ku "amasevisi wami" bese uvakashela ikhasi ledeshibhodi. Hamba kancane ngakwesokunxele semenyu bese uya kuma-IM's logs. Manje setha u-Viber ukusuka kwimenyu ehlayo futhi uzokwazi ukubona izingxoxo, imilayezo, nezingxoxo.
Spy I-Viber Ingxoxo Nezingxoxo
Ungakhathazeki uma ungaqondanga okwamanje ukuqapha i-Viber ingxoxo. Ungabona ukumelela okucacile kokuhlola ku-Viber izingxoxo. Vele uvakashele izingodo ze-Viber bese uthepha kuthebhu ye-viber yengxoxo tracker bese ungakwazi ukubuka zonke izingxoxo ngokufanele.
Izingcingo ze-Viber Voice
Ungakwazi lalela izingcingo zeViber Voice; vele ushaye ithebhu enikeziwe ye-Viber Voice ngemuva kokuthola ukungena kwizingodo. Uzokwazi ukulalela zonke izingcingo ezenzeka ku-Viber uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo esheshayo.
Yikuphi Ukuqapha Nokuhlola Izinto esizihlinzeka nge-Viber Spy software?
Kungani i-TOS Viber Spy App iyadingeka?
Izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo esheshayo njengeViber izindawo eziphephile zokuxhashazwa kwe-cyber kanye nezilwane ezidliwayo ku-intanethi ngokusebenzisana komuntu oyedwa.
Izibalo zibonisa ukuthi i-Viber uhlelo lokusebenza lomlayezo osheshayo luyathandwa phakathi kwabasebenzisi abangaphezu kwezigidigidi ze-o.8. Kusho ukuthi izingane zakho kanye nentsha ingase isebenzise I-Viber yohlelo lokusebenza lomlayezo womphakathi futhi ujwayele ukushayela izingcingo, ukuthumela imiyalezo kubantu abangabazi.
Ngakho-ke, abazali kufanele bayeke izingane zabo ukuba zisebenzise izithunywa ezisheshayo okuthunyelwe kwe-sexting nokuqukethwe kwenyama kunamathela.
Abasebenzi abanamadivaysi omakhalekhukhwini ezinkampani kanye nokuxhumana okusheshayo kwe-intanethi kungase kube ukuchitha isikhathi phakathi namahora okusebenza bese benza izingcingo nokuthumela imiyalezo kubangani babo nozakwabo.
TheOneSpy Isofthiwe yokulandelela i-Viber kwenza umsebenzisi athole izandla zakhe emilayezo ethunyelwe / eyamukelwe kudivayisi ehlosiwe futhi uqinisekise ukuthi abasebenzi bakho bazokwenza umsebenzi wabo ngobuqotho.
I-TheOneSpy inikeza umsebenzisi amandla ukuqapha nokuzingela iziqhwaga zomsebenzi ngenkathi usebenzisa i-Viber software yokuthumela imiyalezo yomphakathi.
Ukuba ngumqashi uzokwazi ukwenza isheke kuwo wonke amathuluzi okuxhumana nemisebenzi ikakhulukazi ku-Viber nakwezinye izinhlelo zokusebenza ze-IM.
4.5 ngokusekelwe ku 8 amavoti
Viber Spy Lokusebenza